Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Linux Mint - LinuxCapable
Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Linux Mint
Mepụta na Akaụntụ Onye ọrụ na Mint Linux
Tinye onye ọrụ ọhụrụ na otu Sudoers na Linux Mint
Mgbe ị wụnye Mint Linux, Akaụntụ onye ọrụ emepụtara n'oge mbido mbụ nwere ikike sudo. Agbanyeghị, enwere ike ịnwe mkpa ịgbakwunye ndị ọrụ sudo ma ọ bụ wepu ohere ahụ. Nke a bụ usoro kwụ ọtọ yana iwu ole na ole.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta tinye onye ọrụ na otu sudoers na sistemụ Mint Linux ọ bụla dị ugbu a.
OS akwadoro: Linux Mint OS ọ bụla dị ugbu a
Melite gi Mint Linux sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị kwalitere ruo ugbu a:
Iji mepụta ndị ọrụ sudo ọhụrụ, ị ga-achọ ịgbanwe na mgbọrọgwụ site na iji su iwu. Site na ndabara na Linux Mint, akaụntụ mgbọrọgwụ enweghị ntọala paswọọdụ, yabụ ị ga-achọ ịtọ nke a tupu ịga n'ihu na-eji iwu a:
Mgbe pịchara iwu a wee pịa igodo ntinye, ngwa ngwa ga-apụta maka paswọọdụ onye ọrụ ọhụrụ wee chọọ ka ị kwado ya. Cheta, maka onye ọ bụla nwere ohere sudoers, yana paswọọdụ siri ike kwesịrị iji mkpụrụedemede ukwu, obere mkpụrụedemede, akara, uru ọnụọgụ na mkpụrụedemede pụrụ iche.
Ugbu a ịtọbala paswọọdụ, a ga-akpali gị maka ozi ndị ọzọ gbasara aha njirimara ị na-agbakwunye. Dejupụta nkọwa dị ka o kwere mee, ma ị nwere ike ịgafe nkọwa ma ọ bụrụ na-amasị gị site na ịpị tinye igodo.
Ozugbo emechara, pịnye "Y”Ma pịa "Tinye igodo" aga n'ihu.
Ị mụtala otu esi etinye ndị ọrụ na sistemụ arụmọrụ Mint Linux gị wee tinye ikike sudo na nkuzi. N'ozuzu, nkuzi a kwesịrị ịrụ ọrụ maka ụdị Linux Mint niile dị ugbu a na-akwado ma akwadoro naanị inye ikike nye ndị ọrụ tụkwasịrị obi ka ha ga-enwe ike ịnweta faịlụ ndị nwere mmetụta na ikike nke sudo nyere.
Categories Mint Linux Tags Sudoers Mail igodo
Otu esi etinye Tor Browser na Pop!_OS 20.04
Otu esi etinye & mepụta VM na VirtualBox na Pop!_OS 20.04